Caddeyn: DF oo dugsiga Jen. Gordon ku wareejisay shir gaar loo leeyahay - Caasimada Online
Home Warar Caddeyn: DF oo dugsiga Jen. Gordon ku wareejisay shir gaar loo leeyahay
Caddeyn: DF oo dugsiga Jen. Gordon ku wareejisay shir gaar loo leeyahay
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowlada Somalia ayaa lasoo warinayaa in Shirkad si gaara loo leeyahay ay ku wareejisay dugsiga tababarka Jen. Gordon oo ay hore u maamuli jirtay dowladda Imaaraadka Carabta.
Dowlada Federaalka ayaa la xaqiijiyay in wareejintaasi ay ula gol leedahay sida loo dhameystiri lahaa tababarida iyo dhammaan howlaha lagu qabto dugsiga oo ay qabyeysay Dowlada Imaaraadka carabta.
Warqad ay ku saxiixan tahay Taliska Ciidanka xoogga dalka ayaa muujineysa in Dugsiga lagu wareejiyay Shirkad lagu magacaabo Red Four Security Group Somalia (RSG).
Shirkadan magaceeda loo soo gaabiyay RSG ayaa loo fasaxay inay si rasmi ah ula wareegto tababarada iyo howlaha ka socday Dugsiga Jen. Gordon, waxa ayna qaabilsanaan doontaa qeybaha Lojistikada iyo tababarka.
Warar aan la hubin oo soo baxaaya ayaa sheegaya in Shirkadan Heshiiska lala galay ee qaabilsan arrimaha Amniga ay maamulaan Khubaro dhanka amaanka ah oo kasoo jeeda dalka Mareykanka.
Dowlada Somalia aya horay u sheegtay inay ku filan tahay dib usoo celinta howlaha Dugsiga Jen. Gordon, waxaana Dugsigaasi Imaaraadka Carabta lagala wareegay bishii la soo dhaafay, iyadoo Saraakiishii maamuli jirtay gebi ahaanba ay joojiyeen howshii tababarka xeradaas.
HOOS KA AKHRISO WARQADA TALISKA MILITERIGA DFS